कान्छी श्रीमती भएर भित्रिएका नेपाली यी ८ नायिका:: Naya Nepal
राउछ जस्ताे देखिएकाे छैन् ।धेरै नेपाली अभिनेत्रीहरुले पहिले विवाह गरेर छुट्टिसकेका श्रीमान् रोजेका छन् भने कोही श्रीमतीसँगै बस्नेको दोस्री श्रीमती भएर पनि भित्रिएका छन् । पहिल्यै विवाह गरिसकेका पुरुष रुचाएर विवाह गर्ने ८ नेपाली अभिनेत्रीबारे यस्ताे छ, जान्नुहाेस्ः
आत्मविश्वास गुमाउँदाको परिणाम
जीवनमा समस्या आउँछ । जीवन छ समस्या पनि छ । जीवन भएपछि दुःखसुख आउनु स्वाभाविक हो । किनभने सुख र दुःखबाटै जीवन सञ्चालित हुन्छ । जीवनका दुईटा खुट्टाहरु छन्, एउटा सुखको, अर्को दुःखको । त्यत्ति नै हो । सुख–दुःखबाट हामी सञ्चालित छौं । हामी हिँड्छौैं। तर, कहिलेकाहीं बडो अप्ठ्यारो स्थिति आउँछ । कतै बाटो देखिँदैन । यति धेरै समस्याहरु हुन्छन् । कसरी समाधान हुन्छ होला ? के गर्ने होला ? भित्र अन्यौल हुन्छ । अलिकति ज्योति पनि काहीँ देखिँदैन । प्रकाश देखिँदैन । मन छट्पटाउँछ । यो बेलामा कसैले उपदेश दियो भने पनि लाग्छ– परेको भए थाहा हुन्थ्यो । जसलाई पर्छ, जसले भोग्छ, उसले जान्दछ । यो बेलामा उपदेश काम लाग्दैन । जीवनमा चारैतिर अँध्यारैअँध्यारो, काहीँ उज्यालो छैन जस्तो हुन्छ । यहाँबाट म पार पाउन सक्दिनँ । यस्तो अप्ठ्यारो स्थिति मानिसको जीवनमा कहिलेकाहीँ आउँछ । स्वाभाविक हो सबैलाई आउँछ । जतिखेर हामीलाई पर्छ, हामीलाई लाग्छ, यस्ता समस्याहरु मलाई मात्रै आयो । तर, हैन सबैको जीवनमा कुनै न कुनै बेलामा यो आक्कलझुक्कल हुने घटनाहरु घट्छन् । यस्तो स्थिति सबैलाई आउँछ । पार कसरी पाउने ? पार पाउनलाई एउटै बाटो छ जति पनि समस्या आएका छन्, समस्यालाई स्वीकार गर्ने । समस्यालाई अस्वीकार गर्यौं भने हामी दुःखी हुन्छौं । चुनौतीहरुलाई अस्वीकार गर्यौं भने हामी दुःखी हुन्छौं । चुनौतीलाई स्वीकार गर्नुपर्छ । म यो भोग्न तयार छु । आफूलाई तयारी अवस्थामा राख्नुपर्छ । किनभने यो जीवन एकप्रकारको युद्ध हो । सिपाही जतिखेर पनि युद्धको लागि तयार हुनुपर्छ । कतिखेर कस्तो समस्या आउँछ, के थाहा ? सबै समस्यासँग जुध्न आफूलाई तयारी अवस्थामा राख्नुपर्छ । चुनौतीलाई स्वीकार गर, आँट भेटिन्छ । विकल्पलाई खुला गर बाटो देखिन्छ । चुनौतीलाई स्वीकार नगरीकन आँट पाइन्न ।
आत्मविश्वास बढ्दैन । हिम्मत आउँदैन, जोश आउँदैन । यो सबै चुनौतीबाट प्राप्त हुन्छ । चुनौतीलाई अस्वीकार गर्ने मानिस, समस्याबाट भाग्ने मानिसलाई आँट आउँदैन । त्यो मानिस आत्मविश्वासमा उपलब्ध हुँदैन । उसको त आत्मविश्वास पनि क्षय हुन्छ । आफूप्रति भरोसै हुँदैन । म गर्न सक्छु भन्ने विश्वासै हुँदैन । तर, जसले चुनौतीलाई स्वीकार ग¥यो, त्यसले आँट भेट्छ । जोश, जाँगर भेट्छ, उत्साह भेट्छ । उमङ्ग भेट्छ र आफूप्रति पूर्ण विश्वासले भरिन्छ । मेरा समस्याहरु समाधानको लागि म आफैं सक्षम छु । म आफैं गर्न सक्छु र विकल्पलाई हरहसमेसा खुला राख्नुपर्छ । जति पनि सम्भावनाहरु छन्, सम्भावनाका ढोकाहरुलाई बन्द गर्नु हुँदैन । जति पनि आफ्ना अगाडि विकल्पहरु छन्, सबैलाई प्रयोग गर्ने, हौसला राख्नुपर्छ । यो चाहिँ विकल्प प्रयोग गर्दिन भन्नु हुँदैन । के थाहा, कुन बाटोबाट कुन तरिकाबाट समस्याको समाधान हुन्छ ।
निराशा भनेको के हो ? निराशा भनेको बाटो बन्द हुनु हो । कुनै विकल्प नदेख्नु, आफूसँग रहेको आफूप्रतिको भरोसा मेटिनु, आत्मविश्वास गुम्नु, यहाँबाट निराशा, यहीँबाट तनाव, यहीँबाट डिप्रेशन, सबै प्रकारका मनका रोगहरु शुरु हुन्छ र यसले सीधासीधा शरीरमा प्रभाव पार्छ र शरीर पनि रोगी हुन्छ । हाम्रो शरीर र मन जीर्णजीर्ण हुन्छ र हामी कुनै पनि कार्य गर्न असमर्थ हुन्छौं र जीवन खेर जान्छ । यति अमूल्य जीवन खेर जान्छ जुन जीवनमा हामी मस्ती, आनन्द, सुखलाई आमन्त्रण गर्न सक्थ्यौं । भोग्न सक्थ्यौं । यो अवसरबाट वञ्चित हुनुपर्छ । जीवन भोग्न सक्दैनौं । जीवन साहसीहरुका लागि हो, हिम्मतिलाहरुका लागि हो । आँटिला, जोशिला व्यक्तिहरुको लागि जीवन हो । जीवन आत्मविश्वासीहरुका लागि हो । जसले आत्मविश्वास गुमायो उसले जीवन गुमायो । आत्मविश्वास सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा हो । आत्मविश्वास गुमाउनु नै अपराध हो । पाप हो । यो भन्दा ठूलो पाप अर्को छैन । जुन–जुन कर्महरु गर्दा हाम्रो आत्मविश्वास गुम्छ, त्यस्ता कर्म गर्नुचाहिँ अपराध हो । जस्तो–जस्तो कर्महरु गर्दाखेरि मेरो आत्मविश्वास जाग्छ, म गर्न सक्छु, म सक्षम छु, सबल छु भन्ने भाव जस्ता कर्महरु गर्दा जाग्छ, त्यस्ता कर्महरु गर्नु नै धार्मिक कार्य हो ।
धर्म हो । आज साह्रा दुनियाँ अधर्मको बाटोमा हिँडेको छ । आजका युवा शुरुमै अधर्मतिर लागेका छन्, अधर्म भनेको आफ्नो आत्मविश्वास गुमाउनु हो । अहिलेका मानिसमा केहीको कमी छ भने त्यो हो आत्मविश्वास । आत्मविश्वास यति ठूलो सम्पत्ति हो जसका लागि सबै सम्पत्ति खर्च गरे हुन्छ । आत्मविश्वासका लागि सबै कुरा गुमाउन सकिन्छ । तर, आत्मविश्वास गुमाएर कुनै पनि चीज प्राप्त ग¥यौं भने त्यसको केही अर्थ छैन । आत्मविश्वास छ भने सबै कुरा छ, आत्मविश्वास यस्तो औषधि हो जसबाट निको नहुने कुनै रोग छैन । आत्मविश्वास यस्तो विधा हो जसबाट प्राप्त नहुने कुनै वस्तु नै छैन । जे इच्छा गर्छौं त्यो पूर्ति हुन्छ । आत्मविश्वासबाट प्राप्त नहुने यो संसारमा केही नै छैन । आत्मविश्वास हुनेका लागि कुनै कुरा असम्भव छैन ।
तर, आत्मविश्वास गुमाएका व्यक्तिका लागि केही कुरा सम्भव छैन, सबै कुरा असम्भव छ । सबैभन्दा ठूलो सम्पत्ति केही हो भने आफूप्रतिको भरोसा हो । आफूसँग विश्वास गर्नु हो । आफ्नो क्षमतासँग विश्वास हुनुभन्दा ठूलो सम्पत्ति दुनियाँमा केही छैन । आफ्नो बुद्धि, आफ्नो विवेक, आफ्ना विचारहरु, आफ्नो भावको सम्मान गर्नुपर्छ । किनभने हाम्रा सबैभन्दा ठूला सहयोगी यिनीहरु मात्रै हुन् । मलाई दुनियाँमा कसैले बचाउन सक्दैन, मलाई अहिलेसम्म पालेको छ, खुवाएको छ, हिँडाएको छ, रमाइलो गराएको छ भने मभित्र रहेका विचार, मेरो आफ्ना विचार, मेरो आफ्नो मन, मेरो आफ्नो बुद्धिले आजसम्म यो अवस्थासम्म लिएर आएको छ । यतातिर फर्किनुपर्छ । यिनीहरुप्रति भरोसा गर्नुपर्छ । अरुसँग भरोसा गरेर के गर्नुहुन्छ ? जतिसुकै नजिकको मानिस होस्, जतिसुकै ठूलो सहयोगी होस्, त्यो सहयोगी सधैं तपाईंको साथमा रहँदैन । हाम्रो साथमा कोही सहयोगी रहँदैन । कुनै न कुनै दिन त्यो सहयोगीसँग हामी छुट्नुपर्छ । विछोड हुन्छ । सधैं सहयोग कसैले गर्न सक्दैन । कति दिन बस्छ सहयोगी ? कुनै न कुनै दिन त मृत्युले विछोड गराइदिन्छ । हटाइदिन्छ आफैंले।
तर, तपाईंभित्रको विचारले, तपाईंको बुद्धि, तपाईंको मन, तपाईंको भाव, तपाईंभित्रको प्रेम गर्ने क्षमता, तपाईंभित्रको सहयोग गर्ने क्षमता तपाईं जबसम्म जिउँदो हुनुहुन्छ तबसम्म साथमै रहन्छ । यसले कहिल्यै छोड्दैन । सदा–सदा यिनीहरुकै भरमा मैले गरिखाएको छु । केही गरेको छु । केही देखेको छ मभित्रको बुद्धिमता, मभित्रको मन सबल भयो सबैले मलाई सम्मान गर्छन्, म जीवनमा प्रगति गर्न सक्छु । मेरो विचार मेरो बुद्धि मेरो विवेक, मेरो मन कमजोर भयो म कमजोर भएँ, अब सिद्धियो । साह्रा दुनियाँले मद्दत गरे पनि मेरो केही हुनेवाला छैन । जसले आफ्नो मद्दत गर्न सक्दैन, उसलाई दुनियाँको कुनै शक्तिले मद्दत गर्न सक्दैन । यहाँ ईश्वर पनि निरीह हुन्छ । जुन व्यक्तिलाई आफूप्रति भरोसा छैन, आफू केही गर्न सक्छु भन्ने लाग्दैन, त्यो व्यक्तिलाई ईश्वरले पनि मद्दत गर्न सक्दैन । आफूप्रति भरोसा हुनुपर्छ । आत्मस्वाभिमान हुनुपर्छ । स्वावलम्बी हुनुपर्छ । स्वावलम्बी बन्नको लागि आत्मसम्मानको लागि, आत्मबलको लागि आत्मशक्ति जागृत गर्नको लागि एउटै तरिका हो, चुनौतीलाई स्वीकार गर्ने । चुनौतीलाई स्वीकार गर आँट भेटिन्छ, विकल्पलाई खुला गर बाटो देखिन्छ । यही हो जीवनको परमसूत्र । जीवन विज्ञान प्रतिष्ठानका संस्थापक तथा जीवन बिकास विशेषज्ञ रमेश नेपालको रोचक विश्लेषणमा भनिएको छ– यसले हाम्रो जीवनलाई सरल, सहज र सुखी बन्छ । हामी सबैलाई पनि आफूभित्रको आत्मविश्वासलाई जागृत गर्ने, आफूभित्रको आँट, जोश, जाँगर, उत्साह, उमङ्गलाई बढाउने अवसर मिलोस् । हामी सबैलाई पनि ध्यान गर्ने अवसर मिलोस् ।